हजारौँ विद्यार्थीहरुका ढु’क’ढु’की ‘कहिल्यै नओइलाउने फूलजस्ता थियौ तर दै’व’ले चुँ’डी लग्यो !’ – Sandesh Press
June 6, 2021 802
झट्ट हेर्दा हृ’ष्ट, पु’ष्ट ब’लि’ष्ठ । मो’टाघा’टा । आँ’टि’ला । खा’इलाग्दा । सधैँभरी हँसिलो अनि च’म्कि’लो त्यो मु’हार । जस्तोसुकै क’ठि’न घडीमा पनि मुसुक्क मुस्कुराउने स्वभाव । कसैलाई केही पर्यो कि आफ्नो ज्यू ज्या’नसमेतको प्र’वाह नगरी काँ’ध दिने । मनभित्र जतिसुकै पी’रको पो’को भएपनि अरुको खुसीको लागि उत्कट हाँसोका छा’लहरु छर्ने । क’र्म’ठ, मिहिनेती, नि”स्क’लं’कि’त च’त्रि’का पर्याय । बहुमुखी प्रतिभाका धनी । कहिल्यै पनि स्वाभिमानबाट च्यु”त हुन नजान्ने । नेपाली भाषा तथा साहित्यका ज्ञा’ता । हजारौँ विद्यार्थीहरुका ढु’क’ढु’की । दिल बहादुर श्रेष्ठ (दिलु)। अब केवल स्मृ’ति प’ट’लमा मात्रै रहनुभएको छ । उहाँका ती उ’प’माहरु अहिले केवल सम्झन मात्र बाध्य भएको छु । कारण उहाँले स’दाका लागि छा’डेर जानु भएको छ ।
गत २ हप्तादेखि भन्टीलेटरमा राखेर दिलुलाई बचाउन चि’कि’त्स’कहरुले हरसम्भव प्रयास गरे । हजारौँले बिभिन्न माध्यमबाट प्रार्थना गरे तर दै’वको अगाडी कसैको केही लागेन । अन्ततहः उहाँले ४२ बर्षको उमेरमा मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटर कक्षमा २०७८ जेष्ठ महिनाको २१ गते शुक्रबार यस धर्तीबाट आँ’खा चि’म्लु’न भयो । हजारौँलाई रु’वा’एर दिलु स्व’र्गबा’स हुनुभयो । मृ”त दिलुप्रति हार्दिक श्र’द्धा’ञ्ज’ली ! शो”कले भा’व’वि’ह्व’ल परिवारजनप्रति भा’व’पू’र्ण स’म’बे’द’ना ! मेरो प्रिय गुरु दिलु तपाईको स्व’र्गमा बास होओस् । अ’लि’वि’दा दिलु श्रेष्ठ !
जब मैले उहाँ यस ध’र्तीबाट बि’दा हुनुभएको भन्ने खबर सुनेँ । किन हो किन पत्यार नै लागेन । दिलुको त्यो दु:खद् खबरले स्त”ब्ध भएँ । भ”क्का’नि’एँ । काम गर्ने कुनै ‘जाँ’ग’र च’ले’न । आँखाबाट ब’र’ब’र’ती आँ’सु मात्र झ’रे । एक्लै कोठाको चु’कु’ल लगाएर रो’इ’र’हेँ । अ’ट्टा’ह’स महसुस भइरहेको थियो । मनभरी वि’यो’गको सु’ना’मी चलिरहेको छ अझै पनि । तै पनि प्रिय दिलु सरको मृ”त्यु भएको छैन भनेर भग’वा’न्संग पु’का’रि’रहेको थिएँ । एकैछिनमा सामाजिक संजाल रं’गि’न थाले उहाँको नि’धन’को सूचनाले । विद्यार्थी, शिक्षक, समाजका अग्रज र बुद्धिजिवीका फेसबुकमा देखिहालेँ अ’ल’वि’दा दिलु सर ! हार्दिक श्र”द्धा”ञ्ज”ली प्रिय गुरु दिलु श्रेष्ठ ज्यू । तिम्रो स्व”र्गमा बास होओस् । रि’प’ दिलु सर । यस्तैयस्तै थप भ’का’न्नि’एँ ।
त्यसपछि न’प’त्या’एर के गर्ने ? प’त्या’उन बाध्य भएँ । मलाई फेसबुकमा पनि उहाँप्रति श्र”द्धा’सु’म’न अ’र्प’ण गर्न मन लागेन उतिखेर । किनकि ठ्याक्कै १ महिनाअघि गत अप्रिल ४ गते मैले उहाँसंग अन्तिमपटक बोल्न पाएको रहेछु । त्यतिखेर उहाँको शी’घ्र स्वा’स्थ्य लाभको का’मना गर्दै सामाजिक संजाल रंगिएको थियो । यो देखिसकेपछि उहाँको अवस्थाको बारेमा थप जान्न मन लाग्यो । र फोन कल पनि नगरी उहाँलाई हेर्न भन्दै म्यासेञ्जरमा भिडिओ कल गरेँ । सुरुमा उठेन । अनि मैले दोहोर्याएर कल गरिनँ । त्यसपछि उहाँले मलाई कल ब्याक गर्नुभएको रहेछ । तर त्यतिखेर मैले पनि रिसिभ गर्न पाइनँ ।
राति साँझ सात बजेतिर फेरि भिडिओ कल गरेँ । त्यहाँ बोल्दा उहाँले जस्तो पहिले हुनुहुन्थ्यो । जस्तो पहिले बोल्नु हुन्थ्यो त्यसरी नै बोल्नु भयो । मैले सोधेँ सर हजुरलाई सन्चो छैन रहेछ । के भएको छ हजुरलाई ? उहाँले उस्तै हँसिलो र ठ”ट्यौ’लो पारामै भन्नुभयो ‘चन्द्र म सन्चै छु । केही भएको छैन । हल्का श्वा’सप्र’श्वा’समा समस्या थियो । हल्का फो”क्सोमा समस्या छ अरे । तर अहिले ठिक छु । औषधी आइरहेको छु ।’ सरको यो स्व’स्थ बोलीपछि म ढु’क्क भएँ । उहाँलाई त्यति ठुलो समस्या भएको रहेनछ भने । कोरोनाको दोश्रो लहरले कैयौँको ज्या”न गएको हुनाले उहाँलाई भनेँ ‘हजुरले विशेष ख्याल गर्नू है । हजुरको श्वा”सप्र’श’वा’समा समस्या रहेछ । हजुरले ख्याल गर्नुपर्दछ ।’
उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो चिन्ता नगर चन्द्र । म ठिक छु । पत्रकार मान्छे तिमी धेरै हिाँडडुल गर्नुपर्दछ । निकै ख्याल गर्नू । त्यो शब्द अहिले सम्झँदा निकै भा’वु’क हुन्छु । उहाँले आफूले बनाएको नयाँ घरको बारेमा पनि सुनाउनु भयो । म औधी खुसी भएँ उहाँ ठिक हुनहुन्छ भन्ने लागेर । ३ मिनेटजति सुख दु: खका गफ गर्यौँ । अनि मनमनै गु’नगु’ना’एँ कि यति स्वस्थ मानिसलाई पनि किन शी’घ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै मानिसहरुले सामाजिक संजाल रं’गा’एको होलान् ? मनमा त्यो कामना गर्नेमाथि एक प्रकारले घृ”णा नै जा’ग्यो मेरो मनमा । कुराकानीको शिलशिला जारी थियो । मैले मेरो एक आफन्तको श्वा’सप्र’श’वा’सको समस्या सुनाएँ, ‘सर मेरो एक जना आफन्तको फो”क्सोमा समस्या छ ? मसिनो ह’ल्का प्वा’ल परेको छ रे उहाँको फो’क्सोमा ।
’ उहाँले भन्नुभयो ‘सम्भव छ । मेरो पनि हल्का समस्या थियो । अहिले ठिक छु । कै पि’र नगर्नु सञ्चो हुन्छ ।’ मैले धन्यबाद भनेँ । यस्तै गफ गर्यौँ । किनकि उहाँ मलाई पढाएको गुरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँको म प्रसंसक नै थिएँ । उहाँ नेपाली विषयका दि”ग्ग’ज गुरु हुनहुन्थ्यो । म मात्र होइन हजारौँ विद्यार्थीका ढु’क’ढु’की हुनुहुन्थ्यो दिलु सर । कक्षा १२ । १२ देखि मास्टर डिग्रीसम्मका विद्यार्थीको आँ’खाको ना’नी बनेर दिलु सर रहनु भएको थियो । आफ्नो विषयमा ग’हि’रो ज्ञा’न हासिल भएका, र पढाउने विषयलाई सजिलै बुझाउन सक्ने भएकाले दिलु सरलाई मन नपराउने कुनै विद्यार्थी थिएनन् । पढाउँदा पनि कहिले गजल भन्ने, कहिले गीत गाउने, कहिले हँसाउने, कहिले रमाइलो ठ”ट्टा गर्ने गर्दा उहाँका प्रत्येक ४५ मिनेटका पिरियड कुनै ना’मु’द हास्य टेलिश्रृङखला या चलचि हेरेको महसुस हुनुथ्यो मलाई ।
क्याम्पसमा कुनै कार्यक्रम भयो कसरी रो’च’क बनाउने ? कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्नेमा उहाँको ध्यान जान्थ्यो । यतिसम्मकी सामाजिक र शैक्षिक विषयमा नाटक तयार गरी कार्यक्रमस्थललाई नाटक घरमै परिणत गरिदिन सक्ने खालको हुनहुन्थ्यो उहाँ । उहाँ भाषा तथा नेपाली ब्याकरणका ज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो । विद्यार्थीलाई कुनै ब्याकरणिक क्रुटी गर्न दिलु सरसामु छुट हुँदैनथ्यो । विद्यार्थीले गरेका साना गल्तीमा पनि पढाउने मुल विषय छोडेर पुरै ४५ मिनेटको पिरियड खर्चेको समेत भुल्नुहुन्थ्यो उहाँ । शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको क्रममा उहाँसंग विताएका प्रत्येक सकेण्डको सम्झना आइरहेको छ अहिले मलाई । अहिले उहाँसंगको क्षण सम्झन्छु अनि भ’का”न्निे गरेको छु । म मात्र होइन उहाँको नि’ध’नपछि हजारौँ विद्यार्थीका आँ’खा र’सा’ए’का छन् अहिले ।
विद्यार्थीको मात्र होइन उहाँ क्याम्पस प्रशासनमा पनि सबैको ना’नी बन्नु भएको थियो । करिब १३ बर्ष अघि यस्तै वि सं २०६३ । ६४ सालमा सिद्धार्थ क्याम्पस बुङचीमा प्रध्यापनमा जोडिनु भएका उहाँ कहिल्यै आ’लो’चि’त हुनु परेन । निरन्तर क्याम्पस र विद्यार्थीको श्रृ’वृ’द्धिमा आफ्नो समय खर्चनु भएका उहाँले क्याम्पसले ऐतिहासिक क्यूएए गर्ने दौरानमा पनि प्रमुख भूमिका खेल्नु भयो । यस खालको सक्रियता, ल’गा’व र उर्जाका कारण नै कयाम्पसले उहाँलाई नेपाली नेपाली विषय विभागको बिभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो । त्यसअघि वि सं २०५८ । ५९ सालमा उहाँ बाणगंगा १ वैरियामा रहेको आ’व’र वि’ज्ड’म बोर्डिङ स्कुलमा पनि नेपाली विषय शिक्षक भएर पढाउनु भयो । यसरी हेर्दा करिब २० बर्षसम्म कपिलवस्तुको शैक्षिक उन्नयनमा भूमिका खेलेका हो’न’हा’र ब्यक्ति गु’मा’ए’को महसुस सबैले गरेका छन् । उहाँ साँच्चिकै बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न बयक्ति हुनहुन्थ्यो ।
यसैकारण उहाँलाई क्याम्पसले विद्यार्थी परामर्श समितिको संयोजक समेत बनाएको थियो स्व’र्गि’य श्रेष्ठलाई । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली भाषा तथा साहित्यमा एमफिल जस्तो विशिष्ट अध्ययन सक्नु भएका उहाँ बाणगंगा साहित्यिक प्रतिष्ठानको आजिवन सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै उहाँ अन्य साहित्यिक संस्थाको नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नु भएको थियो । उहाँको नेतृत्व गर्ने क्षमताका कारण नै उहाँ नेवार समाज कपिलवस्तुका सचिव समेत बन्नु भएको थियो । साहित्यको गजल तथा कथामा विधामा राम्रो द”ख्ख’ल’ता हासिल गरेका उहाँमा चित्रकला तथा काष्ठकलाको पनि उत्तिकै ज्ञान थियो । उहाँले भर्खर बनाउनु भएको वै’रि’याको घरमा पनि उहाँको हस्त तथा काष्ठकलाको उत्कृष्ट नमुना देख्न सकिन्छ । यति मात्र होइन जिल्लामा हुने गजल, कविता, बा’दवि’वा’द, व’कृ’त्ता, गीतसंगित आदिका प्रतियोगितामा पनि प्रमुख र सहायक निर्णयकको भूमिका समेत उहाँले नि’भा’उ’ने गर्नुहुन्थ्यो ।
८० बर्ष कटेका बुबा र वृद्ध आमा, ३४ बर्षकी श्रीमती लक्ष्मी श्रेष्ठ, १० बर्षको छोरा शार्दुल श्रेष्ठ । छोरी ६ बर्षकी छोरीबाट स’दाको लागि वि’दा हुनुभएका श्रेष्ठको अ’न्ति’म सं’स्का’र गर्दाको क्ष’णमा जम्मा भएका मानिसको हु’लले पनि बताउथ्त्यो कि उहाँ कति लोपप्रिय ब्यक्लिाई जिल्लाले गु’मा’यो भनेर । देउरालीघा”टमा जब दिलु सरको चि”तामा उहाँको १० बर्षको एक अ’बो’ध पुत्र शा’र्दु’लले दा’ग’ब’त्ति दिँदै थियो बातावरण सुनसान र स्त”ब्ध बन्यो । सेतो पि’पि’ई लगाएको ब्यक्तिले ला’स चलाई रहँदा र त्यो बाबुले दा’ग’व’त्ति दिँदाको स्थितिमा न’रु’ने कोही रहेन । सबै घुँ”क्क घुँ”क्क रो’इ’रहे’को थिए घा”ट”मा । विद्यार्थी वृद्ध, शिक्षक, साथी, पत्रकार नरुने सायदै कोही पनि भएन ।हेर्दा हेदै उहाँका मृ”त श’री’र ख’रा’नी भयो । सबै भ”क्का”नि”को मन बोकेर आआफ्नो घरघर लागे म”सा”नघा”टबाट ।
समाजमा पनि उहाँ निकै सहयोगी ब्यक्तिका रुपमा चि’त्रि’त हुनहुन्थ्यो । जसलाई जे समस्या परे पनि काँ”ध था’पिहा’ल्ने । कोही विरामी पर्यो मोटरसाइकलमा राखी दौडाई हाल्ने । कसैले अन्याय गर्यो भने हात समेत उठाउन पछि नपर्ने सा’ह’सि’लो स्वभावको समेत हुनुहुन्थ्यो दिलु सर । उहाँको ब्यक्तित्वको बारेमा जति नै ब’खा’न गरे पनि कम हुन्छ यहाँ । उहाँका अनन्य मित्र गोविन्द खनालका अनुसार उहाँलाई गत बैशाख मसान्तबाटै श्वा”स’प्र”श्वा”समा समस्या भएको रहेछ । त्यसपछि उहाँले कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पतालमा सामान्य उपचार गर्नुभयो । बीचमा नि’को भयो पनि । यही बीचमा ३ महिनाअघि भारतको गोरखपुरमा पनि उहाँको जाँच भएको रहेछ । उहाँको एमआरआइपछि उहाँमा बो”न टिभी भएको प्रमाणित भएको रहेछ । त्यसपछि उहाँ विस्तारै कमजोर हुँदै जानु भएको खनालले मसंग बताउनु भयो ।
मैले १ महिना अघि गरेको कुराकानीमा उहाँले यति पी”डा लु’का’र’एर बोल्नु भएको रहेछ । बल्ल मैले पछि थाहा पाएँ । अरुको खुसीको लागि आफ्ना त्यस्तो ज’टि’ल पी”डा पनि भुल्ने अरु दिलु श्रेष्ठहरु समाजमा कमै पाइन्छ । त्यसपछि उहाँमा खो”की देखियो । स्वास्थय ज”टिल बन्दै गएको रहेछ उहाँको । बीचमा फेरि ठिक भयो । तर पछि उहाँलाई फेरि कोरोना पनि थपियो । कोरोनाको कारण श्वा’स प्र’श्वा’समा थप स’म’स्या हुँदै गयो । सामान्य उपचारको का’बुबाट टा’ढा गइसक्नु भएका उहाँलाई अब भे’न्टि’ले’टरको सहायता चाहिने भयो । अनि उहाँलाई रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा ६ दिनअघि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिँदै आइएको थियो । श्रेष्ठको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अवस्थामा सबैले शी’घ्र ला’भको कामना गरे । तर कसैगरी उहाँलाई ब’चा’उन सकिएन ।
जेठ २१ गते शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजे उहाँको नि’धन’को औपचारिक खबर बाहिरियो । यो खबर सुन्नासाथ कसैलाई पनि प’त्या’र भएन । कोरोनाले कपिलवस्तुका नेपाली भाषा तथा साहित्यका ज्ञाता दिलु श्रेष्ठलाई पनि नलगि छोडेन । उहाँको नि’ध’नले अहिले सिद्धार्थ क्याम्पस स्त”ब्ध बनेको छ । अगामी समयका प्रत्येक पलपलमा उहाँको अभाव ख’ड्कि’ने क्याम्पसका सहायक प्रधानाध्यापक गोविन्द खनालको महसुस छ । दिलु सरले त क’लि’लो उमेरमै हामीलाई छोडेर जानु भयो । उहाँले जीवनमा अं”गा”ल्नु भएका मा’र्गलाई पछ्याउनु नै उहाँप्रति गरिने सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ । फेरि पनि अ’ल’वि’दा मेरो प्रिय दिलु सर । हजुर अ’ज’रअ’म’र हुनहुन्छ । हजुरलाई जीवनको अन्त्यसम्म कहिल्यै भुल्ने छैन ।मायादेवी, चन्द्रकान्त न्यौपाने, चारनम्बर
Prevसाताको पहिलो दिनमै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Nextभारतमा ब्राजिलवाट आयो नयाँ भेरियन्ट, ७ दिनमै तौल घटेर आधा बनाउँछ